Cysts and Lipoma ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အလုံးအကျိတ် – Mawlamyine Daily
Cysts and Lipoma ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အလုံးအကျိတ်
Mawlamyine Daily	က်န္းမာေရး, ေဆာင္းပါး	 September 8, 2020 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၂၀
၁။ Dr ရှင့်ကျွန်မအဖေတွက်ပါရှင့် အသက်က ၄၄ပါ။ အဖေ့ရဲ့တင်ပါးကြားရဲ့ဘေးမှာ အကျိတ်ရှိနေလို့ပါ။ ထွက်လာတာ ၅နှစ်လောက်ရှိပြီ။ အခုကြီးကြီးလာလို့ပါ။ အကျိတ်က နည်းနည်းပျော့စိစိနဲ့ပါ။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆရာ။ လိမ်းဆေးများရှိလားဆရာ။ တခါမှမပြဘူးသေးဘူးဆရာ။ ခါးတွေလည်းမကုန်းနိုင်ဘူးတဲ့ဆရာ။ ဆွဲလှန်ပြစ်သလိုဖြစ်တယ်တဲ့ဆရာ။ ကျေးဇူူပါဆရာ။မမြင်ရ မစမ်းရပေမဲ့ မှန်းပြောပါမယ်။ ၂ မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ Lipoma ခေါ် အဆီကျိတ်နဲ့ Sebacious cyst ခေါ် ချွေးထွက်အိတ်အကျိတ်။ ပဌမဟာပိုဖြစ်နိုင်။ စိုးရိမ်ရန်မရှိလောက်။ ဆရာဝန်ပြရင် သေချာမယ်။ အဲတာသာမှန်ရင် ဆေးနဲ့မရ။ ခွဲရ။ သည်အတိုင်းထားလည်းရ။
၂။ ဆရာမင်္ဂလာပါ။ ရိုသေစွာမေးမြန်းလိုပါတယ်ရှင့်။ ကျမအစ်မ အသက် (၃၅) နှစ်ပါ၊ အပျိုပါဆရာ။ ရာသီကတလတခါ ပုံမှန် လာပါတယ်ဆရာ။ သူ့နောက်ကျောမှာ ၂၁၀၁ လောက်တည်းက အကျိတ်တခု ရှိပါတယ်ဆရာ။ ဆရာဝန်ပြကြည့်တော့ အဆီကျိတ်လို့ပြောတာနဲ့မခွဲခဲ့ပါဘူးဆရာ။ အခု သူ့အကျိတ်က ပြည်ထွက်နေလို့ပါဆရာ။ ပြည်ထွက်တာ (၅) ရက်လောက်တော့ ရှိပါပြီဆရာ။ ပြည်က တစက်နှစ်စက်လောက်ပဲထွက်တာပါဆရာ။ အကျိတ်နေရာက အသားအရောင်တော့ မပြောင်းပါဘူးဆရာ။ သူအလုပ်က အသုပ်ရောင်းတာဆိုတော့ ငရုတ်သီးကြော်တာ၊ ဆီချက်ချက်တာတော့ လုပ်ရပါတယ်ဆရာ။ ပြည်ထွက်နေတော့ အကျိတ်အခြေအနေစိုးရိမ်ရလားသိချင်ပါတယ်ဆရာ။
မမြင်ရ မစမ်းရပေမဲ့ မှန်းပြောပါမယ်။ ၂ မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ Lipoma ခေါ် အဆီကျိတ်နဲ့ Sebacious cyst ခေါ် ချွေးထွက်အိတ်အကျိတ်။ ဒုတိယဟာပိုဖြစ်နိုင်။ အရပ်ခေါ် ဆပ်ဆံခဲလို့ခေါ်တဲ့ အဖြူ-မီးခိုးရောင် ခပ်ပျစ်ပျစ်အရာ အောင်းနေတာ။ အဆင်မသင့်ရင် ပြည်တည်တတ်တယ်။ ၂ မျိုးလုံးမှာ အိတ်ခွံပါတယ်။ ပျောက်ဘို့ ခွဲရတယ်။ မခွဲလည်း ဘာမှမဖြစ်။ နည်းနည်းသာ ပိုကြီးနိုင်။ ပြည်တည်နိုင်။ ခွဲရင် အိတ်ခွံပါထုတ်မှသာ ထပ်မဖြစ်။ ကင်ဆာမဟုတ်။ ကင်ဆာ မပြောင်း။
3။ မင်္ဂလာပါ ဆရာ။ သမီးနာမည်က့့့ ပါ။ အသက် ၂၃။ မြစ်ကြီးနားမြို့ကပါ။ ရာသီလည်းမှန်ပါတယ်ရှင့်။ လည်ဂုတ် ဆံစပ်နားမှာ အကျိတ်တလုံးပေါ်လာပါတယ်။ ဘာရောဂါများ ဖြစ်နိုင်မလဲရှင့်။ စိုးရိမ်မိလို့ပါရှင့်။
အကျိတ်ကို တိတိကျကျပြောပါ။ တည်နေရာ၊ အရွယ်အစား၊ ပုံပန်း၊ ရွှေ့ရမရ၊ နာမနာ၊ အရောင်။
ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ လည်ဂုတ် ဆံစပ်နားမှာပါ။ အရွယ်အစား လက်သန်းလောက်ရှိပါတယ်။ အကျိတ်က လုံးဝန်းတဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိပါတယ်။ ရွှေ့လို့ရပါတယ်။ ဖိလိုက်ရင် နည်းနည်းနာပါတယ် အရောင် မရှိပါ။ ဆရာ လည်ပင်းနားမှာ နောက်ထပ် အကျိတ်တလုံးထပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ စိုးရိမ်ရလား။ ဆရာဝန်ပြသင့်မပြသင့်ဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ဆရာအားရင် ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်ဖြေပေးပါဦးနောဆရာ။
မေးခွန်းမေးသူက ကချင်အမျိုးသမီးတယောက်ပါ။ မေးခွန်းမေးတာရော စာရေးတာပါ ကောင်းတယ်။ သတ်ပုံလည်း သဏ္ဌာန်ကအစ မှန်တယ်။ တစ်လုံးကိုသာ ကျွန်တော့်စံအရ ပြင်လိုက်ပါတယ်။ ဆောရီး။ ရွှေဗမာတွေ နမူနာယူပါလေ။
အလုံး-အကျိတ် ခေါ်ကြတာတွေက လူကိုယ်မှာ နေရာမရွေး၊ ကျား-မ မရွေး၊ အရွယ်မရွေး ဖြစ်ကြတယ်။ အလုံး-အကျိတ် မှန်သမျှကို အခြေခံအားဖြင့် ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တာဆိုပြီး ၂ မျိုးခွဲပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးက Cysts (ဆစ်စ်) ဖြစ်တယ်။ အဖုံးပါတဲ့အိတ်ကလေးမျိုး ဖြစ်တယ်။ အထဲမှာ အရည်လိုဟာ အဖတ်လိုဟာ တမျိုးမျိုးရှိတယ်။ လူ့ကိုယ်မှာ နေရာမရွေး၊ လူမရွေး၊ အရွယ်မရွေး သိပ်ဖြစ်ကြတယ်။ အရွယ်အစားလည်း အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။ (ဆစ်စ်) ဘာလို့ ဖြစ်ရသလဲ။ အသုံးများလို့သဘော၊ ဇရာသဘောကနေဖြစ်တယ်။ ရောဂါပိုးဝင်လို့၊ မျိုးဗီဇချို့ယွင်းလို့ကနေဖြစ်တာ၊ မွေးရာပါဖြစ်တာ။ အရေပြားနဲ့ကပ်နေရင် စဖြစ်ကတည်းက သိသာမယ်။ ရင်သားလို အထဲမှာဆိုရင် စမ်းလို့ရအောင် ကြီးလာမှ သိတတ်တယ်။ အသည်းလို၊ ကျောက်ကပ်လို အင်္ဂါတွေမှာဖြစ်နေရင် ဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ မခံစားရမချင်း သိသေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ X-ray, Ultrasound, CAT scan, MRI တွေ ရိုက်ရင်းမှ သိလာတာမျိုးလဲရှိတယ်။
အများစုကြီးက ကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ တချို့က ကင်ဆာနဲ့ ရောဂါပိုးဝင်တာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုကုသမလဲ ဆိုတာ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်လဲ နဲ့ ဘယ်နေမှာလဲ အပေါ်မူတည်တယ်။ ကြီးနေရင်၊ ရောဂါလက္ခဏာ ခံစားနေရရင် ခွဲစိတ် ထုတ်ပြစ်ရတယ်။ တခါတလေ အထဲက အရည်ကို စုတ်ထုတ်နိုင်တယ်။
1. Sebaceous cysts (Epidermal cysts) ချွေထွက်ဂလင်းအိတ်အရေပြားမှာ ကျိချွဲချွဲအရည် အောင်းနေတယ်။ အနံ့ဆိုးတယ်။ မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ ကိုယ်၊ ဗဂျိုင်းနား နေရာတွေမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ချွေးထွက်အိတ်တွေ ရောင်တာ-ပိတ်တာကနေဖြစ်ဖြစ်၊ ထိခိုက်မိရာကနေဖြစ်ဖြစ် ဒီရောဂါဖြစ်တယ်။ မနာဘူး၊ ပိုးဝင်ရင်တော့ နာလာမယ်။ ဖြေးဖြေးချင်းကြီးတယ်၊ အရွယ်သေးတယ်၊ အရေပြားအောက်မှာ ဟိုဘက် ဒီဘက် ရွေ့လို့ရတယ်။ အတွေ့အကြုံများတဲ့ ဆရာဝန်တွေက မြင်တာနဲ့ တန်းသိတယ်။ တချို့က သူ့ဖါသာသူ ပျောက်နိုင်တယ်။ လိုအပ်ရင် ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်ရမယ်။ ထိခိုက်ရာဖြစ်ဖြစ်၊ ကုပ်မရာကဖြစ်ဖြစ် ပိုးဝင်လာတတ်တယ်။ ပြည်တည်လာတတ်တယ်။
2. Dermoid Cyst (ဒါးမြိဳက္-ဆစ္စ္)မွေးရာပါဖြစ်တယ်။ စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းတယ်။ အထဲမှာ အသေအခြာ စစ်ကြည့်ရင် ဆံပင်၊ အရည်၊ သွား၊ အရေပြား ချွေးထွက်အိတ် စတာတွေ ပါနေနိုင်တယ်။ ဖြေးဖြေးချင်း ကြီးတယ်။ ပေါက်အထွက်ရင် မနာဘူး။ ၄ နေရာမှာဖြစ်တယ်။(က) Dermoid cysts in the brain ဦးနှောက်မှာဖြစ်တယ်။ အဖြစ်တော့ မများပါ။(ခ) Dermoid cysts in the nasal sinuses နှာခေါင်း-ဆိုင်းနပ်စ်မှာဖြစ်မယ်။ ခွဲထုတ်ရတာ ခက်တယ်။(ဂ) Ovarian dermoid cysts မျိုးဥအိမ်မှာ ဖြစ်တယ်။ မျိုးပွါးနိုင်တဲ့အရွယ်တွေမှာဖြစ်တယ်။ အညှာလိုရှိလို့ လိမ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲလိုဖြစ်ရင် နာမယ်။ ချက်ချင်းခွဲရတတ်တယ်။ ဒီရောဂါကို ခွဲထုတ်လို့ အထဲကဟာတွေကြည့်ပြီး (အပင်း) လို့ပြောကြတယ်။ ပေါက်ထွက်တာ၊ ပိုးဝင်တာတွေလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ရှားရှားပါးပါး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်။(ဃ) Dermoid cysts of the spinal cord ခါးရိုးဆစ်ထဲက အာရုံကြောမှာဖြစ်တာ။ ပိုးဝင်တတ်တယ်။(င) Dermoid cysts of head and neck မျက်နှာနဲ့ ဦးခေါင်းမှာ အဖြစ်မနည်းလှပါ။ Lipoma, sebaceous cyst ရိုးရိုး အကျိတ်နဲ့အတော်တူတယ်။ ခွဲယူပြီး ဖွင့်ကြည့်မှ အထဲမှာ ကိုယ်မွှေးလိုဟာတွေ တွေ့ရတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဗိုက်ထဲမယ် မျိုးဥအိမ်မှာဖြစ်တာနဲ့ သဘောဆင်တယ်။ ကြီးတာနဲ့ သေးတာသာကွာခြားတယ်။ အဲတာကိုတော့ အပင်းလို့လို့ ခေါ်ရမှန်းမသိကြပါ။
3. Ganglion Cyst (ဂင္ဂလီယြန္)အဆစ်နေရာအထက်မှာ အရွတ်ကြောကို ဖုံးထားတဲ့အလွှာနဲ့ ဆက်ဖြစ်တယ်။ အထဲမှာ အရည်ကြည် ချွဲပြစ်ပြစ်ရှိတယ်။ ဂျယ်လီလိုဘဲ။ အသက် ၂ဝ-၄ဝ ကြားမှာ ၇ဝ% ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ပိုဖြစ်တယ်။ ၁ဝ နှစ်အောက်ဖြစ်တာ ရှားတယ်။ လက်ကောက်ဝတ်မှာ ၆ဝ-၇ဝ% ဖြစ်တယ်။ ၁-၃ စင်တီမီတာ ရှိမယ်၊ ရွေ့လို့မရဘူး၊ ကြီးလာလိုက် သေးသွားလိုက်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့မှာ နာမယ်။ ၃၈-၅၈% က အလိုလို သေးသွား တတ်တယ်။ စာအုပ်ထူထူ ကိုင်တာမျိုးကနေ ပျောက်တတ်လို့ Bible cysts လို့လဲ ခေါ်တယ်။ Aspiration စုပ်ထုတ်တာလဲ လုပ်တယ်။ စုပ်ပြီး (စတီရွိုက်) ဆေး ထိုးပေးတာလဲ လုပ်တယ်။ ၇၅-၈၅% ပြန်ဖြစ်တယ်။ ခွဲတာကောင်းတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး ရက်ရွေး ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်ပါ။ ခွဲစိတ်ရတာ လွယ်မလိုလိုနဲ့ ပြန်ဖြစ်တတ်လို့ ဆရာဝန် နာမည်ကောင်းမရတတ်ဘူး။ ခုခေတ်မှာ Arthroscopic surgery ကင်မရာပါတဲ့ ကရိယာ သေးသေးလေးသုံး ခွဲတာမျိုး ပေါ်နေပြီ။
4. Cystic Acne and Acne Cysts ဝက်ခြံ (ဆစ်စ်)မကြီးဘူး။ ပိုးဝင်ရာကနေဖြစ်လို့ နီနေမယ်။ သွေးဖြူဥတွေနဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေ စစ်တိုက်ကြတယ်။ ပြည်တည်လာမယ်။ ၁-၅ မီလီမီတာအထိ ရှိမယ်။ ဝက်ခြံကို ဆေးကုသလို ကုရတယ်။ ပြည်ရှိတာတော့ ထုတ်ရမယ်။ ညှစ်မရရင် ခွဲထုတ်ရတယ်။ ဝက်ခြံ ပျောက်အောင်လုပ်ရင် အဆင်မသင့်လို့ ပိုဆိုးလာရာကနေဖြစ်နိုင်တယ်။ အစားအသောက်ညံ့တာ၊ အသီးအနှံ၊ အသီးအရွက် မစားဖြစ်တာမျိုးကနေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗီတာမင် (အေ) နည်းရင်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်-အလုပ် ရှုတ်ရင်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။